कविता : विचरो म
– बुद्धिमान बस्नेत मौसुफले जब फलानो पदमा तोकिदिनु भो, तब म तोकमान भएँ । दलहरुले गलहत्याए, आन्दोलनको झोकमा र म झोकमान भएँ । ………………….. फेरि, तैँ चाहिन्छस् भनेर उनैले बोके मलाई फेरि म बोकमान भएँ । शक्तिमा छँदा भ्याएसम्म ठोकेँ भुराहरुलाई अनि म ठोकमान भएँ । ……………..
कविताः झुटो इतिहास लेखाइएको छ
– बाबुराम पन्थी ‘गुल्मेली’ इतिहास गलत हुँदैन भन्थे तर म आज जे देख्दै छु सब गलत लेखिएको देख..
गजल : जे देखियो
– अनु भट्टराई रूख चडाई फेद काटेको देखियो आफन्तले आफन्तलाई ढाँटेको देखियो समानताको परिभाषा ..
कथाः विचरी अम्बु
– अञ्जना के.सी. “कभि साम ढले तो मेरे दिल में आजा ना कभि चाँद खिले तो मेरे दिल में आजा ना&#..
कविता: साहित्यको खेती
–अजित क्षेत्री भोक र शोकमा पनि हाँस्ने अभाव र दुःखमा पनि बाँच्ने रित्तो गोजी तर सधैँ व्यस्..
कविता : जून
टलक्कै भयो टल्कियो श्रीमुहार सदा देख्न पाउँ गरेँ यो पुकार । सधैँ भेट आसा गरौँला कुरेर तिमी झट्ट आऊ यहीँ नै मनेर ।।१।। सबै रातमा साथ देऊ खुलेर मलाई तिमी चुम्न खोज्छौ छुपेर । सुधांशु प्रभामा म हाँसौँ जमेर सधैँ आउनू मित्र मै हुँ भनेर ।।२।। छ चीसो हवा बस्छु एक्लै खपेर बिरानो छ बस्ती […]
भित्तामा झुण्डिएको उसको र मेरो फोटोलाई एकोहोरो नियालिरहँदा ती दिनको याद आयो, जुन दिनहरुमा म उसको प्रेममा दिवाना थिएँ । घरभन्दा दुई किमि परको हाम्रो स्कुल अनि स्कुलभन्दा सय मिटर पर उसको घर । बिदाको दिन पनि स्कुल जाउँझैँ लाग्ने ती दिनहरु । अतीत सम्झेर मन हाँस्न खोज्छ तर पीडाले मुस्कुराउन सक्दिनँ । साँच्चै ! […]
कथा : जीवनको सम्झौता
-वाहिद अली उसको मुहार रङ जाने कपडा धोएपछि अथवा वासी गुलाफ जस्तै फिक्का फिक्का । न रङ थियो न चमक । एउटा डमी जस्तो मिलेको रुप जिउडाल तर रङ उडे उडे जस्तो । अनि डमी जस्तै देखिनका निम्ति मात्र जस्तो । पहिरन पनि केवल देखाउनका निम्ति जस्तो । पानी दिने बहानामा ऊ आफूलाई हामी बीच […]
कथा : सुन्तलीले दिएको चोट
-सुनिल पौडेल एउटा सानो गाउँ थियो । गोरेको सुन्तलीसँग संसार बसाउने दाउ थियो । बजाइयो बाजा दुवै तर्फबाट, नाचे मान्छेहरू, भाँचे कमर, ठिटा तरूनीहरुको छुट्टै माहोल थियो । बूढापाकाहरू पनि गुट गुट बनेर गफ गरिरहेका थिए । कोही भन्दै थिए– भाग्यमानी रहिछे केटी, राम्रो खान्दानिया र असल लोग्ने पाई । कोही थप्दै थिए, केटी पनि […]
लघुकथा : बन्द जिन्दावाद ! बन्द मुर्दावाद !
-सरगम भट्टराई सडकमा चना बेच्ने नन्दप्रसादले गत महिना सडकमा एउटा भयावह घटना देख्छ, सुन्छ । सरकारको विरोध स्वरुप विपक्षी पार्टीले नेपाल बन्द गरेको, टायर बालेको, सवारी साधन तोडेको, जलाएको, खुकुरी हानाहान गरेको । संसद अवरुद्ध गरी चल्न नदिएको, सरकारले आन्दोलन दबाएको, कार्यकर्ता गिरफ्तार गरेको आदि । सत्ता धारी मन्त्रीज्यूले पत्रकार सम..
कथा : एटीएम कार्ड
-रामु ओली कफीको पहिलो चुस्कीसँगै उनले भनिन्– “घरमा बिहेको कुरा चलाउदै छन् । केटो इन्डियन आर्मी हो रे ! घरका सबै राजी भैसकेका छन् ।” बोल्दा बोल्दै केही सस्पेन्स बाँकी राखी केही शब्दलाई धम्कीको पारामा अपूर्ण नै छोडिन् । कफीको पहिलो चुस्कीका लागि कप उठाउँदै थिएँ, गुरुत्वाकर्षण बलले खिचेझैँ मेरो कफीको कप टेबलमै थेचारियो । […]
कविता : सडक
#8211; इ. राकेश कार्की सडक सडकमै हुन्छन् जनता सडकमै हुन्छन् विरोध सडकमै हुन्छन् आन्दोलन सडकमै हुन्छन् रगत पसिना सडकमै कराउँछन् भोका पेटहरु सडकमै हराउँछन् नाङ्गा शरीरहरू सडकमै छोडिन्छन् स्वाधीनता सडकमै उफ्रिँदै रून्छन् केवल नेतृत्व वर्ग फेरिन्छन् भाषणको शैली फेरिन्छन् कहिले सडकमा आन्दोलन गर्छन् कहिले सरकार चलाउँछन् कहिले भाषण गर..
कथा : पासोमुक्त जिन्दगी
सुनसान रात । मन अनि मस्तिष्क त्रासले कम्पित छन् । आँखामा निन्द्रा पटक्कै छैन । निस्कनै नसकिने खाल्डोमा परेझैँ जिन्दगीले निसासिएको महसुस गरिरहेको छ । भोलिको अनिश्चित भविष्य अनि सम्भावित दुष्परिणामले झर्कै लाग्ने गरी चारैतिरबाट गिज्याइरहेको छ । लामो सुस्केरासँगै सङ्गिता कोल्टे फर्किन्छिन् । ‘जोसमा होस् हँुँदैन भन्थे, साँच्चै हो रह..
कविता : कालिदासकी विध्वत्तमा
#8211; नम्रता भट्टराई थिइन् होला ऐश्वर्यले पुलकित रूपवती सुन्दरी अहङ्कारको भुमरीमा रुमल्लिएकी एक अहङ्कारी न त भविष्यको चिन्ता, न विगतको कुनै पश्चताप थियो पूर्णता सारा त किन घमण्डको त्यति बिघ्न राप सजाए सपना ती मृगनयनले आउनेछन् वितृष्ण राजकुमार सपना त फगत भ्रम, याथार्थमा आखिर भयो तुसारपात हुन्थ्यो होला जीवन सौम्य, सहज अनि सायद स..
गजलः खास मान्छे
-माधव पौडेल नजरको माया मुटुमा सर्ने कसले बनायो मन दुख्दा आँशु झर्ने कसले बनायो उसकै माया मिसिएझैं लाग्छ श्वास लिँदा पनि लिएको यो श्वास फेर्नुपर्ने कसले बनायो कोही मान्छे यति खास हुन्छन् किन पहिलो भेटमै मन चोर्ने कसले बनायो मन मस्तिष्कमै यति द्वन्द किन भइदिन्छ मनको कुरा मस्तिष्कले नटेर्ने कसले बनायो अचेल गजल पढेपछि सोध्छन् [&hell..
गजल : लुट्नेहरुको बात फरक
लेखनाथ खनाल काटे रगत सबको उस्तै, किन भयो जात फरक भाँडाकुँडा बनाइदिए, पाकेपछि भात फरक परिश्रम र पसिनाको सम्मान किन हुन्न यहाँ नेपाली भै गौरव गर्छौं, समाजको मात फरक मन्दिर बन्छन् मूर्ति बन्छन कोही हुन्न अछुत भो पुजारीले छोएपछि देउताको नि औकात फरक भन्छन् सबै समाजबाट निर्मूल पारौं सामन्तको अनेकथरी बाहनामा लुट्नेहरुको बात फरक दरौ–४, ..
कविता : भन्छौँ प्यारो छ नेपाल
गौतम ‘उदय’ चाहान्नौँ बस्न स्वदेशमा, खोज्छौँ नेपाल भूगोलमा पछाडि परेको सम्बन्धमा, गर्दैनौँ चिन्तन मनमा नगर्छौँ हामी सवाल–जवाफ, न गर्छौं यहाँ मिहिनेत तर भन्छौं प्यारो छ नेपाल । अध्ययन भन्छौँ, भ्रमण भन्छौं, प्यापार भन्छौँ रोजगार भन्छौँ जसरी हुन्छ नेपालको सिमाना, काटेर जान दाम्लो चुडाल्छौँ शरणार्थीपत्र आफ्नो बनाउँछौँ, नागरिकता नै फा..
कविता : सङ्घीयतामा एकता
-बाबुराम पन्थी ‘गुल्मेली’ हजारौँ सपूत बलि चढे सङ्घीयता ल्याउनलाई पिल्सिएका जनतालाई अधिकार दिनलाई विखण्डन होइन सङ्घीयता बुझौँ विकेन्द्रीकरण स्वर्णिम यो मातृभूमिमा सुगन्ध थपिने छ झन् । सौन्दर्य बुझ्नु जरूरी छ सङ्घीयताको हुने छ सहज पहुँच अनि सुगम भूगोलको कालीगढ सिङ्गो जसरी खण्ड खण्ड बनाउँछ जोडी खण्ड खण्डबाटै सुन्दर आकार बनाउँछ इतिह..
रेडियोसेटमा क्लिकऽऽ क्लिकऽऽ आवाज आयो । ठोक्दे ! सालेलाई उडा ! त्यही रुखको फेदमा छ । आकासमा एक्कासि नाइटभिजन भटटटट गर्दै आयो । लाइटले पूरै जङ्गल उज्यालो भयो । हेलिकप्टरको हावाले जङ्गलका रुखपात हल्लिए । जुन रुखमा हान्ने आदेश गरे’थ्यो । म त्यहीँ थिएँ । वरिपरि बम, बारुद बर्सिन थाल्यो–ढड्यङ, ठ्याङ, ठडङ्, ढ्वङ् ! एकोहोरो […]
जिन्दगीमा जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति आए पनि जीवनका आरोह अवरोह, उकाली ओराली, अफ्ठ्यारा घुम्ती कुइनेटोहरुमा सुखदुःख साट्दा जिउने मर्ने छौँ भनेर अग्निलाई साक्षी राख्दै कुशम र म सातफेर मण्डव घुमेको अस्ती जस्तो लाग्छ । तर समय कहाँ मैले सोचेको जस्तो र मलाई लागेको जस्तो गतिमा दौडन्छ र ? समय त आफ्नै गतिमा चल्छ, यो ध्रवसत्य हो […]
गजल : पुर्खाको बिरासत
कङ्क्रिटको गारो र छानोले मात्रै बलियो घर हुन्न जब त्यहाँभित्रै आफन्त नाताको कुनै भर हुन्न । दिदैन न्यानो पन, मरिसकेको लासले थाहा छ, त्यसैले जिउँदो लास रोज्ने कसैलाई रहर हुन्न । स्वतन्त्रताको व्याख्या के हो ? बुझ्न जरुरी छ, मर्छ स्वतन्त्रता त्यहाँ, जहाँ सबैको कदर हुन्न । जोगाउने कसम थियो पुर्खाको बिरासत तर, भविष्य अँध्यारो [&hell..
लघुकथा : कर्तव्य
वैकुण्ठ ढकाल श्रीषा र श्रवणबीच आपसी भेटघाटपछि हिमचिम बढ्दै गयो । भेटघाट बाक्लिँदै गयो । उनीहरुको भेटघाट प्रेममा परिणत भयो र एकअर्काविना बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । उनीहरुले एकअर्कालाई राम्ररी बुझेका थिए । आ–आफ्नो क्षेत्रमा सफल थिए । श्रीषा एक सफल कर्तव्यनिष्ठ महिला प्रहरी थिइन् । उनको हातबाट अपराधी उम्केको रेर्कड थिएन । त्यस्त..
कथा : सुन्तलीले दिएको चोट…
सुनिल पौडेल एउटा सानो गाउँ थियो । गोरेको सुन्तलीसँग संसार बसाउने दाउ थियो । बजाइयो बाजा दुवै तर्फबाट, नाचे मान्छेहरू, भाँचे कमर, ठिटा तरूनीहरुको छुट्टै माहोल थियो । बूढापाकाहरू पनि गुट गुट बनेर गफ गरिरहेका थिए । कोही भन्दै थिए– भाग्यमानी रहिछे केटी, राम्रो खान्दानिया र असल लोग्ने पाई । कोही थप्दै थिए, केटी पनि […]
रामु ओली कफीको पहिलो चुस्कीसँगै उनले भनिन्– “घरमा बिहेको कुरा चलाउदै छन् । केटो इन्डियन आर्मी हो रे ! घरका सबै राजी भैसकेका छन् ।” बोल्दा बोल्दै केही सस्पेन्स बाँकी राखी केही शब्दलाई धम्कीको पारामा अपूर्ण नै छोडिन् । कफीको पहिलो चुस्कीका लागि कप उठाउँदै थिएँ, गुरुत्वाकर्षण बलले खिचेझैँ मेरो कफीको कप टेबलमै थेचारियो । […]
इ. राकेश कार्की सडक सडकमै हुन्छन् जनता सडकमै हुन्छन् विरोध सडकमै हुन्छन् आन्दोलन सडकमै हुन्छन् रगत पसिना सडकमै कराउँछन् भोका पेटहरु सडकमै हराउँछन् नाङ्गा शरीरहरू सडकमै छोडिन्छन् स्वाधीनता सडकमै उफ्रिँदै रून्छन् केवल नेतृत्व वर्ग फेरिन्छन् भाषणको शैली फेरिन्छन् कहिले सडकमा आन्दोलन गर्छन् कहिले सरकार चलाउँछन् कहिले भाषण गर्छन् सडक..
लेखनाथ खनाल काटे रगत सबको उस्तै, किन भयो जात फरक भाँडाकुँडा बनाइदिए, पाकेपछि भात फरक परिश्रम र पसिनाको सम्मान किन हुन्न यहाँ नेपाली भै गौरव गर्छौं, समाजको मात फरक मन्दिर बन्छन् मूर्ति बन्छन कोही हुन्न अछुत भो पुजारीले छोएपछि देउताको नि औकात फरक भन्छन् सबै समाजबाट निर्मूल पारौं सामन्तको अनेकथरी बाहनामा लुट्नेहरुको बात फरक दरौ–४ [..
बाबुराम पन्थी ‘गुल्मेली’ हजारौँ सपूत बलि चढे सङ्घीयता ल्याउनलाई पिल्सिएका जनतालाई अधिकार दिनलाई विखण्डन होइन सङ्घीयता बुझौँ विकेन्द्रीकरण स्वर्णिम यो मातृभूमिमा सुगन्ध थपिने छ झन् । सौन्दर्य बुझ्नु जरूरी छ सङ्घीयताको हुने छ सहज पहुँच अनि सुगम भूगोलको कालीगढ सिङ्गो जसरी खण्ड खण्ड बनाउँछ जोडी खण्ड खण्डबाटै सुन्दर आकार बनाउँछ इतिहा..
कथा : केटी जिस्काउन डराउने म
दीपक घिमिरे केटी जिस्काउन म डराउँछु । तर ऊ कत्ति पनि डराउँदैन । अस्ती ठमेलमा घुम्दै गर्दा एउटी चाइनिजलाई जिस्काइदियो । म डराए, ऊ झन् जोडले सिठ्ठी बजाउँदै इशारा ग¥यो । चाइनिजले मस्किँदै बाई मात्र गरी । अनि ढुकुरे छाती फुल्याउँदै भन्यो– ‘देखिस्, जिस्काउँदैमा केटी रिसाउँदैनन् । बरु राम्री रैछु भनेर मख्ख पर्छन् ।’ केटी […]